Sunday January 13, 2019 - 17:16:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markale qorsheynaya in uu sarkaal Ajnabi ah ugacan geliyo mid kamida kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Siyaasiyiin iyo xildhibaanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Farmaajo uu guddoomiyaha guud ee Bankiga dhexe umagacaabi doono sarkaal Ajanbi ah oo kasoo jeeda mid kamida wadamada reergalbeedka.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa bartiisa Facebook-ga ku qoray in Nin ajnabi ah uu madax ka noqon doono Bankiga dhexe si uu umaamulo dhaqaalaha soo gala dowladda.
"Beec geynta Bangiga Dhexe waa mashruuc bilowgiisa aan aragno, laakiin dhamaadkiisa cid aysan ogeyn, soo jeedin wax loogu bedelayo sharciga Bangiga Dhexe ayaa la horkeenayaa Golaha Shacabka" ayuu yiri Mahad Salaad.
Arrintan ayaa buuq siyaasadeed ka dhax abuurtay madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka, ilo wareedyo ayaa sheegaya in Cabdi Raxmaan Beylle oo ah wasiirka maaliyadda uu Farmaajo usoo jeediyay in nin shisheeye loo dhiibo Bankiga dhexe si kalsooni looga helo hay'adda IMF iyo Bankiga adduunka oo marwalba dowladda Federaalka ku eedeeya Musuq maasuq iyo wax isdaba marin.
Dowladda Federaalka ayaa taariikh madoow oo soo jireen ah uleh in shisheeye ay ugacan geliso badda iyo barigga Soomaaliya waxaana xusid mudan in kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada diyaaradaha iyo dekadaha ugu muhiimsan dalka ay gacanta ku hayaan shirkado laga leeyahay wadamada Turkiga iyo Imaaraatka Carabta.